စစ်တပ်စတိုင် sequins နှင့်အတူ, ပွင့်လင်း, ရှည်ရှည်အဖြူရောင်, နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်ဇာ, ထုတ်, ရှင်းလင်းသောပခုံး, အလျားလိုက်အပေါက်, အချိုးမညီအောက်ခြေ, - အမျိုးသမီးများမိန်းကလေးစတိုင်ကို T-ရှပ်အင်္ကျီ
စတိုင်တီရှပ်များ - သူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာနှင့်မည်သို့တစ်ဦးစတိုင်လေးကိုဖန်တီးနည်း
ရွေးချယ်တဲ့အခါအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးအဆင်းလှသောလိင်၏အဝတ်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ အမျိုးသမီးအဝတ်အစားတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနှင့်လမ်းအမှုအရာကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်ပေးအပ်ထားတဲ့ leggings ဖြစ်ကြသည်။
နာမည်ကြီးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာအများအပြား collection များကိုမိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်စတိုင်တီရှပ်များပေါ်လာပါသည်။ သူတို့ကအောက်ပါထားတဲ့အကြားကွာခြားမှုအမျိုးမျိုး, ကိုယ်စားပြု:
မြိတ်အလှဆင်၏ပုံစံအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လူကြိုက်များတိုတိုမော်ဒယ်တစ်ဦးဖက်ရှင်ဝဲအဖွစျဆောငျရှကျနိုငျသညျ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်ပါးလွှာသောမိန်းကလေးတစ်ဦး၏ရွေးချယ်မှုကြောင်းအကြံပြုသည်ရပ်တန့်ရန်ဒါ, ရှင်းလင်းသောဝမ်း၌ထားကြ၏သောတစ်ဦးကလူငယ်စတိုင်,
တီရှပ်တစ်ဦးပြားချပ်ချပ်ပခုံးနှင့်လမ်းကြောင်းသစ်၌တည်ရှိ၏။ အဲဒါကိုပျော့နှင့် flirty ကြည့်ပေးသည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကများစွာသောမိန်းကလေးငယ်များချစ်မြတ်နိုးသည်။ တစ်သတိပညာရှိပုံစံသို့မဟုတ်အလှဆင်ပန်း, ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းကဲ့သို့သောဂျမြားရှိလိမ့်မည်
ထိပ်မှာကိုပြုပြင်တာတွေ elastic တီးဝိုင်းနှင့်အတူကောင်းသောထုတ်ကုန်ကြည့်ပါကကြော့ရှင်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများပေးမယ့်အင်္ကျီနဲ့ဆင်တူပါတယ်။ အင်းလေး Shuttle, လေး, ပန်းစေ့သို့မဟုတ် applications အစိတ်အပိုင်းများ၏ပုံစံအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်မည်အကြောင်း,
leggings ပုံနှိပ်နှင့်အားသာချက်များကိုရှေ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်ရောက်ဖြစ်ကြောင်းပုံစံများဆံ့။ အဆိုပါပုံစံတိကျတဲ့ဘာသာရပ်, ဆောင်ပုဒ်သို့မဟုတ်ပဲသာမန် image ကိုပါဝင်နိုင်ပါသည်;
image ကိုဒါပေမယ့်လည်းကမ္ပည်းမသာအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါဟာသုတ်ဆေး, ပုတီး, တောက်ပ sequins သို့မဟုတ် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်,
သံမဏိစည်းလုံးညီညွတ်ကြောင်းဘာသာရပ်လိုင်းများအခိုင်အမာ မတ်ေတာရှိသောစုံတွဲများ ။ ဤသည်ကိရိယာအစုံကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့ဝယ်ယူနှင့်သူ၏ဒုတိယတဝက်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အချို့သောချို့တဲ့ပြင်ဆင်ရန်နိုင်စွမ်းအမျိုးသမီးတွေ၏ညာဘက်ရွေးချယ်မှုရှည်လျားတီရှပ်နှင့်အတူကိန်းဂဏန်းများ။ သူတို့ကအထူးသဖြင့်ကောင်းစွာတင်းကျပ်စွာဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ဘောင်းဘီရှည်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားပါသည်။ ဒါဟာမှတ်သားစေခြင်းငှါထုတ်ကုန်များ၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာများနေသောခေါင်းစဉ်:
ဒါဟာပုံစံလျှောက်လွှာ, ပန်းသို့မဟုတ်တောက်ပ sequins အတွက်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းစေခြင်းငှါ,
တစ်ဦးပစ္စည်းဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြာရသောဝါဂွမ်း, လူကြိုက်များနှင့်ထိုးပြီးထည်, အဝတ်လျှော်မှာ touch နှင့်အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှပျော့, ကောင်းလှ၏။
တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်နဲ့မှတ်မိလွယ်တဲ့ကြက်သွန်နီကိုဖန်တီးရန်ပိုနှစ်သက်သူကို Ladies သည်, ပုံစံမျိုးတစ်ဦးငါးပိ၏ပုံစံကိုအသုံးပြုသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းမော်ဒယ်တန်ဖိုးထားပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကမဆိုဖြတ်၏ထုတ်ကုန်လျှောက်ထားပေမယ့်သူတို့နှင့်အတူအထူးသဖြင့်ကောင်းစွာစတိုင်အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်အနက်ရောင်ထုတ်ကုန်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောရွေးချယ်စရာအလှဆင် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်မှတ်သားစေခြင်းငှါ:
ဒီဇိုင်နာများထုတ်ကုန်၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားသည့်အကြီးစားအလှဆင် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်မှရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပိုနှစ်သက်သူကိုမိန်းကလေးများ, အလှဆင်ဒြပ်စင်၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏင်တစ်ဦးအရာကောက်လို့ရပါတယ်;
သူတို့ထိုကဲ့သို့သောပိုး, ဖဲနှင့် chiffon အဖြစ်လှပသောပိတ်ထည်နှင့်ဖန်ဆင်းလျှင် leggings ထွက်ညနပေိုငျးအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။
ဖြတ်ဒါမှမဟုတ်ထည်ကနေတဆင့် denude နိုငျသောရှပ်အင်္ကျီတဦးတည်းပခုံးဒီဧရိယာ၌လျှော့ချစေခြင်းငှါ,
မော်ဒယ်ရှည်လျားသောအင်္ကျီလက်ဖြစ်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရှည်အခမဲ့ဖြတ်တောက်ခြင်းကပ်လျက် silhouette ရှိစေခြင်းငှါ,
ရိုးရှင်းသောသို့မဟုတ် flounces ၏အရာရှိနေခြင်းကိုအလှဆင်။
အလွန့်အလွန်အဆင်ပြေနှင့်အံ့မခန်းပုံနှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်အလျားလိုက်အပေါက်နဲ့တာရှည်တီရှပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ဤအထူးခြားသော features တွေသွင်ပြင်လက္ခဏာ:
ဒါဟာတွက်ဆသေးငယ်တဲ့အပြစ်အနာအဆာဖုံးကွယ်ဖို့ကြီးမားတဲ့အားသာချက်ဖြစ်သည့်လုံလောက်သော silhouette ရှိပြီး;
ခွဲစိတ်အသေးစားဖြစ်, သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်, အခါးလိုင်းမှတက်ဖြစ်နှင့်ပင်အထက်တွင်တည်ရှိသောစေခြင်းငှါ,
မှတ်မိလွယ်တဲ့နှင့်အမှတ်ရစရာကြက်သွန်ပွင့်လင်း INSERT သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်၏ရှေ့မှောက်တွင်လုံးဝပါးလွှာကွက်၏ဖန်ဆင်းထားသည်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ကဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်ချက်အကောင်းတစ်ဦးပုံနှင့်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များ၏မူကွဲရှိပါတယ်:
ကွဲပြားခြားနားသောအလျား - ကထိပ်ဆုံး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရှည်လျားသောပွင့်လင်းရှပ်အင်္ကျီဆင်တူသောတိုစေနိုင်ပါတယ်;
ထို့နောက် preference ကိုအနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူအရောင်များကိုအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အရောင်သည်, တစ်ဦးအရာအတူတူအရောင်၏ဘရာစီယာရွေးကောက်တော်မူသည်။ ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်ကောက်ခြင်းနှင့်အရောင် option ကိုနိုငျသညျ
ထုတ်ကုန် monophonic ဖြစ်သို့မဟုတ်အလှဆင်ဒြပ်စင်ပါဝင်စေခြင်းငှါ - ပန်းသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းများ။
ဒါဟာရေတိုကိုပြန်ရှည်လျားတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောပုံအင်္ကျီရှေ့စဉ်းစားသည်။ ဒါဟာအချို့အားနည်းချက်များကိုကိန်းဂဏန်းများဖျောက်ရန်တတ်နိုင်သောအခမဲ့ခြေထောက်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများရှိစေခြင်းငှါ:
ပခုံးမှာအောက်ဆုံးပါဝင်အတူသို့မဟုတ်အံ့မခန်းစရာမလိုဘဲ sleeved ကြလိမ့်မည်
အင်းလေးပုံနှိပ်, ထုတ်, applications များ၏ပုံစံအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်မည်အကြောင်း,
ထိုကဲ့သို့သောပုံစံများရဲ့မျက်နှာပြင်မှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်: ပန်း motif, ်မြို့တော်အက္ခရာများ, အနုပညာရှင်ပုံတူ, 3-D ကိုတိရိစ္ဆာန်ရေးဆွဲ။
ထည်အာရုံစိုက်သင့်တယ်, အဲဒါကိုဝါဂွမ်းခဲ့ကြောင်း သာ. ကောင်း၏, ထဲမှာပါတဲ့ဒုတိယနေရာအနိုင်ရခဲ့သည်;
ကို cut နှငျ့ ပတျသကျ. , ထို့နောက်အကြီးမြတ်ဆုံးလူကြိုက်များပုံစံ-သငျ့ကို T-ရှပ်အင်္ကျီကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်စတိုင်ခဲ့သည်, သူတို့ကတာရှည်ခြင်းနှင့်တိုတို-ကျီနှစ်ဦးစလုံးဖွစျနိုငျသ;
ဒါဟာအကြီးအကြည့် မော်ဒယ်ဝါးတားပိုလို သေးငယ်တဲ့ကော်လာနှင့်အနည်းငယ်ခလုတ်၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်၎င်း,
အခြို့သောအမှုအရာသားရေ INSERT, ကြိုးကိုနှင့်တရားစွဲအသေးစိတ်ကိုအားဖြင့်ပြည့်စုံလျက်,
ထုတ်ကုန်လုံးဝဇာထည်၏ လုပ်. ,
ဇာအင်းလေးအသေးစားနှင့်စုံစုံနှင့် multilayer နှစ်ဦးစလုံးဖွစျနိုငျသောသာကော်လာပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်မည်အကြောင်း,
စတိုင်ဇာအင်္ကျီပိုကောင်းသည့်ပုံစံမျိုး၏ကြော့ရှင်းအလေးပေးဖို့နူးညံ့သိမ်မွေ့ pastel အရောင်ထွက်သယ်ဆောင်။
တောင်မှအများဆုံးဇီဇာဖက်ရှင်ပုံနှိပ်နှင့်အတူမူလအမျိုးသမီးအဝတ်အတိတ်သို့မသွားနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့ကို T-ရှပ်အင်္ကျီပေါ်ဤအကြောင်းစတိုင်ထုတ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်ပုံရိပ်တွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ရှိပါသည်:
နိမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုး, မူရင်း script ကို လုပ်. ,
ထိုကဲ့သို့သော Nike က, Adidas, Louis Vuitton နှင့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်လိုဂို-လူသိများသည့်ကုမ္ပဏီများ,
မကြာသေးမီနှစ်များတွင်အလှဆင်အတွက်လူကြိုက်များဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်း Gothic အဘိဓါန်စတိုင်။
ခမ်းနားပုံစံများ၏ပိုင်ရှင်လည်းမိမိတို့အဘို့, လက်ျာမော်ဒယ်ရွေးချယ်ရာတွင်, ဖက်ရှင်နှင့်ဆွဲဆောင်မှုကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျနော်တို့ကအောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များကိုသုံးပါ:
စံ option ကိုအနည်းငယ်တင်ပါးကိုဖုံးအုပ်ထား, တစ်ပုံစံပါလိမ့်မယ်;
V-shaped ရပ်နားမှတဆင့် cleavage ဖော်ပြပိုကောင်းစိတ်ဖိစီးမှုဇုန်;
ခါးဇုန်သီးခြားတစ်ခု elastic တီးဝိုင်းနှင့်အတူဂျနေနိုင်တယ်,
ကြောင့်မော်ဒယ်များများ၏မတူကွဲပြား, သင်လေးကိုအတူနီးပါးမည်သည့်စတိုင်တီရှပ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဤဘုံရွေးချယ်စရာမှတ်သားစေခြင်းငှါ:
အားကစားလမ်းများအတွက်ရိုးရှင်းသောတင်းကျပ်စွာလြှံနဲ့မော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတောက်ပထုတ်သို့မဟုတ်ဖော်ပြအရေးအသားသုံးပြီးအာရုံစိုက်ဖို့အကြံပြုသည်။ ထိုသို့သောအမှုကိုအားကစားအင်္ကျီသို့မဟုတ်ဘောင်းဘီတိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလှဆင်ဒြပ်စင်တစ်ခုများစွာသောမရှိဘဲလိုအပ်သောစုံစုံမော်ဒယ်ကိုဆိုလိုသည်များအတွက်, တကဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူသဟဇာတကြည့်ကြလိမ့်မည်။ တစ်ရုံးအဖြစ်ကြက်သွန်နီဖြည့်စွက်တင်းကျပ်တရားဝင်ဘောင်းဘီဒါမှမဟုတ်စကတ်ဝတ်ပြုကြလော့။
ရိုမန်းတစ်စတိုင်လ်တစ်အလှဆင်အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောကြောင့်ပုတီး, sequins, rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်, ဇာ, အပြင်အဆင်ပုံစံရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောအရာတွေနဲ့ကြော့ကြည့်ရှုမယ်လို့ တစ်ဦးဇာအင်္ကျီ နှင့် dressy ဘောင်းဘီ။
တစ်ဦး cardigan ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
စိမ်းဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ကိုအဘယ်သို့ မှစ. ?
Hollofaybernye ဂျာကင်အင်္ကျီ - နွေးသို့မဟုတ်မဟုတ်လော
သြစတြေးလျ mosaic ဖန်
မြို့ရိုးအဘို့အ Fancy နောက်ခံပုံများ
Au Vol အနီရောင် caviar နှင့်အတူရင်ဖွ - တောက်ပအလှဆင်နှစ်သစ်ကူးရဲ့စားပွဲပေါ်မှာ
အဆိုတော်ဘီယွန်းသူမ၏ခင်ပွန်းထံမှ sverhopeku ညညျးညူ
အိန်ဂျလီနာဂျိုလီ Harper ကိုဇား၏အဖုံးချီးမြှောက်ခဲ့
ဧည့်ခန်းများအတွက် modular ပရိဘောဂ
Amniotic အရည်ယိုစိမ့် - အရိပ်လက္ခဏာ
အမှေစား Topshop နှင့်အတူစီရော်နယ်ဒိုကိစ္စ?